Fadeexad: Sheekh Shariif oo ciidan beeleed uu direys u soo xirey keenay Muqdisho - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Fadeexad: Sheekh Shariif oo ciidan beeleed uu direys u soo xirey keenay Muqdisho
Waxa maanta magaalada Muqdisho yimi ciidan beeleed loo soo xaday dharkii ciidanka oo fadhiid Sheekh Shariif iyo fadhiid Xasan Sheekh Ka dambeeyay oo sheegtay inaan la siin wax mishahara. Ujeedada ciidan beeleed Jan oo iyagu afkooda Ka sheegay in laga aruuriyay deegaanada ay degan yihiin beesha Sheekh Shariif.
“Unuka wax ma qaadan waxaana maqalay in madaxweynaha yiri ciidanka wax kama maqna ayuu yiri will dhalinyaro ah oo u muuqan in weligii uu ka mid noqdey ciidanka laakiin haysta hubkii dawlada ama kii beeleedka.
“Hadaad run sheegayso mid u eg ayaa la sheegaa ayuu yiri Cali Calasow weyna u muuqata in la soo abaabuley oo xataa loo soo xaday dharkii ciidanka.
Ciidanka dawlada u diiwaan gashan ayaa waxa caadi u ah in marmarka qaarkood ay direyska Ka iibsadaan argagixisada Shabaab. Saraakiisha ciidanka aagaga Muqdisho ayaanabu badan beesha laba fadhiid ee Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh.
“Markii uu fadhiid Sheekh Shariif lahaa simna wala ciidan ayaan haystaa oo aan qortey wuxuu sheegatay kuwan maanta uu Keenay Muqdisho. Maaha markii ugu horeysay ee ciidan beeleed sidaan oo kale loo soo abaabulo oo la is yiraa dhibco kaga hel dawlada.
” Waxaan idiin xaqiijinaynaa in ayna jirin ciidan dawlada u diiwaan gashan oo bilaa mishahara ayuu yiri sarkaal u hadley ciidanka, waana loo jeedaa inay bug yihiin ayuu raaciyay.